ရွှေသံလွင် မီဒီယာနှင့် mytel တို့ ပူးပေါင်းမှု ပထမဆုံး ခြေလှမ်းသစ်အဖြစ် အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွ - Yangon Media Group
ရွှေသံလွင် မီဒီယာနှင့် mytel တို့ ပူးပေါင်းမှု ပထမဆုံး ခြေလှမ်းသစ်အဖြစ် အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွ
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၃
အင်္ဂလန် ပရီးမီယားလိဂ်(English Premier League 2018-2019) ပွဲစဉ်များကို မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် အခပေး ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ရွှေသံလွင်မီဒီယာနှင့် Mytel တို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် သြဂုတ် ၁၃ ရက်က စာချုပ်ချုပ်ဆိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သြဂုတ် ၁၃ ရက်က Mytel ရုံးချုပ်တွင် SIGNING CEREMONY of Advertising Agreement between Shwe Than Lwin Media Co.,Ltd and Telecom Intern- ational Myanmar Co.,Ltd for English Premier League 2018-2019 အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ကာ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစာချုပ်ချုပ်ဆိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုစာချုပ်ချုပ်ဆိုလက်မှတ်ရေးထိုးကာ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရခြင်းသည် တယ်လီဗေးရှင်းနှင့်အနီးကပ်ရှိမ နေသည့် မြန်မာပြည်သူများနှင့်အ ဝေးရောက်နေသူများအနေဖြင့် Online အသုံးပြုကာ မိုဘိုင်းဖုန်း ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ် ကြောင်း ရွှေသံလွင်မီဒီယာမှ Senior Vice President ဦးကျော်လွင်က ပြောသည်။
”အဓိကစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ အ ကြောင်းရင်းကတော့ mytel ကနေ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ English Premier League အတွက်ကို (OTT)Sponsor လုပ်ပေးတာပါ။ မီဒီယာမှာလည်း Co-Sponsor အဖြစ်ပါ ဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။ အဲဒီလို လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် လတ်တလော မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေ တယ်လီဗေးရှင်းနဲ့ အနီးကပ်မရှိ နေတဲ့သူတွေအဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေ အွန်လိုင်းဖုန်းကနေ သူတို့ ကြည့်လို့ရပါပြီ။ ပက်ကေ့ခ်ျကိုလည်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှ English Premier League2018-2019 ပွဲတွေကို ဖုန်းကနေကြည့်လို့ရဖို့အားလုံး စီ စဉ်ပေးထားပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ရွှေသံလွင်မီဒီယာနှင့် mytel တို့အနေဖြင့် 2018-2019 English Premier League ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးပါကလည်း ရေရှည်အကျိုးတူပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များလည်းရှိကြောင်း mytel မှ Chief Technology Officer Mr.Nguyen The Nghia ကပြောသည်။ ”ရွှေသံလွင်ကို mytel က Support လုပ်ပေးတာ။ Facebook Page ၊ ကြော်ငြာဘေဘုတ်အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ကြေညာသွားမယ်။ တစ်နှစ်လောက်ပဲမဟုတ်ဘဲ English Premier League ပြီးသွားရင်လည်း အခြားဟာတွေလည်း ရေရှည်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
(English Premier League 2018-2019)ဘောလုံးရာသီစတင်သည့်အချိန်ကတည်းက English Premier League ချန်နယ်ကို မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် ပိုက်ဆံပေးပြီး ကြည့်လို့ရနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဦး ကျော်လွင်က ပြောသည်။ ”(English Premier League 2018-2019)ပွဲရာသီစကတည်း ကမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ကြည့်လို့ရတဲ့အ စီအစဉ်စနေပါပြီ။ စာချုပ်ချုပ်ဆို လက်မှတ်ရေးထိုးဖြစ်တာကတော့ သြဂုတ် ၁၃ ရက်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္တမြောက် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတစ် ခုဖြစ်သော Mytel က ဇွန် ၁ဝ ရက် မှစတင်ကာ တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဆင်းကတ်များကိုရောင်းချခဲ့ပြီး Mytel ကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗီ ယက်နမ်နိုင်ငံ၏ Viettel နှင့်ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းကာ အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ရင်း နှီးမြှုပ်နှံဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီချုပ်ကို အရေးယူပေးရန် တိုင်ကြားမှုအပေါ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ အကြောင်းပြန်ချက်ကို ဘဝင်မ
နိုင်ဂျီးရီးယား အရှေ့မြောက်ပိုင်း လေဆိပ် စစ်သားများဆန္ဒပြ၊ သေနတ် မိုးပေါ်ထောင်ပစ်
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနောက် ရဲက အရပ်ဝတ်ဖြင့် လိုက်နေခြင်းမှာ လုံခြုံရေးပေးသည့် သဘောဟုဆ
မြန်မာ့ရွှေဈေး ကျပ် ၉၃ဝဝဝဝ ကျော်တွင် ရှိနေသေးဟုဆို
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှုကို အခွန်ကောက်ခံသင့်ဟုဆို
ဆော်ဒီ ဘီလျံနာ မင်းသား အယ်လ်ဝါလိ နေအိမ်ဟိုတယ် အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှာ??
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုသည့် စကားရပ်သက်ဆိုင်မှု မရှိ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ပြင်ဆ?
လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရမှာ ပါတီ၏ အောက်တွင်သာရှိဟု ဒီချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌပြော
Share 2934 Tweet 0
သမ္မတသစ် ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ ရက် ၁ဝဝ ပြည့်စစ်တမ်း